AMISOM oo taliye cusub loo magacaabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 10 July 2015
Muqdisho ( Mareeg)-Sida uu daabacay wargayska The Gazette Weekly Jonathan Rono ayaa si rasmi ah ula wareegay hogaanka Ciidamada howgalka AMISOM ee Soomaaliya howgalka nabad ilaalineed u jooga dalka Soomaaliya dagaalkana kula jira dhaq dhaqaaqa Soomaaliya ee dowalda ka soo horjeeda.
Jonathan Ronon ayaa badalaya Gen Andrew Gutti oo ka soo jeeday dalka Uganda horayna u soo hogaaminayay Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala.
Mr. Rono oo ka soo jeeda dalka Kenya ayaa la sheegay in uu yahay shaqsi qibarad u leh howsha loo idmay.
Taliyahan cuusb ee AMISOM loo magacaabay ayaa dhawaan booqasho ku tagay jasiiradda Kudhaa ee gobalka Jubbada hoose halkaas oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kala waregeen dhaq dhaqaaqa Soomaaliya , waxaa uuna halkaas ka sheegay in weerarkii Leego ee askarta badan looga dilay AMISOM aysan niyad jab uga dhigneen oo ay sii xoojin donaan dagaalkooda ka dhan ah Xarakada Al Shabaab si guud ahaan dalka loogu soo celiyo gacanta dowladda Soomaaliya .
Mr. Rono ayaa carabka ku adkeeyay in Amisom ay qaadi doonto dhawaan duulaan xoogan oo dhaq dhaqaaqa Soomaaliya looga sifaynayo degaanada iyo degmooyinka ay maamulaan sida uu hadalka u yiri.
Dalka Soomaaliya ayaa waxa ka socda howlgalka loogu magac daray AMISOM oo ay wadaan dowladaha Midowga Africa, kaas oo tageero Milatari lagu siinayo dowladda federaalka Soomaaliya
ZAMZAM Foundation oo gargaar ka qaybisay Koonfurta Somalia, Puntland iyo Somaliland (Sawirro)